Animaker: Do-It-Yourself Animation Studio, Onye Nlekọta Ihe Ego Video, na Onye Mmepụta Video Ad Martech Zone
Ihe nkiri na vidiyo dị ndụ dị mkpa maka ọgbakọ ọ bụla. Vidio na-arụ ọrụ nke ọma, nwee ikike ịkọwa echiche siri ike n'ụzọ doro anya ma nyekwa ahụmịhe nke ọhụụ na nke a na-anụ. Ọ bụ ezie na vidiyo bụ usoro dị ịtụnanya, ọ na-abụkarị ihe a na-apụghị imeri emeri maka obere ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị na-ere ahịa n'ihi akụrụngwa achọrọ:
Ọkachamara vidiyo na akụrụngwa maka ndekọ.
Ndị ọkachamara n'olu maka akwụkwọ edemede gị.
Ndị ọkachamara na eserese na mmemme iji webata.
Ma, ikekwe, akụ dị oke ọnụ ma dị oke egwu - nhazi ọkachamara maka mmetụta.
Ozi ọma ahụ bụ na anyị na-aga n'ihu na-ahụ ọganihu - ma na ngwaike na ngwanrọ. Ekwentị ọgbara ọhụụ nwere ike idekọ vidiyo mara mma na mkpebi 4k bara ụba. Tinye igwe okwu ọnụ ma ụda gị ga-agbakwunye ahụmịhe ọhụụ. Layer in intros, outros, music, visuals, or even animations ma ị nwere ike ịnwe mpempe ahịa ọdịnaya dị irè na-enweghị imebi akụ.
Animaker si animation na idezi nyiwe
Animaker si onye na-ewu ụlọ na-dobe na-eme ka ọ dị mfe maka onye ọ bụla ịmepụta vidiyo na-akpali akpali site na iji ndebiri emere tupu ya na akụ dị njikere iji nweta nkà na ụzụ efu. A na-ewu ikpo okwu maka ndị mmadụ n'otu n'otu ma ọ bụ ìgwè iji mepụta ụdị vidiyo ọ bụla.
Ndị na-ere ahịa na-eji Animaker eme ihe nyocha, vidiyo na-abanye, vidiyo na-akọwa, vidiyo na-akọwa ihe nkiri, vidiyo ngosipụta, akaebe ndị ahịa, ngosi azụmaahịa, mgbasa ozi vidiyo, ihe ngosi mmịfe, vidio Instagram, vidiyo Facebook, na vidiyo Youtube na mgbasa ozi vidiyo.
Otu n'ime atụmatụ kachasị mma bụ na Animaker na-enye gị ohere ịlọghachite vidiyo gị maka nyiwe dị iche iche dị mfe. Naanị pịa bọtịnụ resize ma gbanwee n'etiti ụdị vidiyo dị iche iche ozugbo.
Ndị a bụ ụfọdụ n'ime atụmatụ ndị ọzọ dị egwu na arụmọrụ:
Ihe nkiri animation Animaker na-enyere gị aka ịmepụta na bipụta vidiyo gị eserese yana ngwaọrụ niile dị mkpa:
Onye Okike Character - Na ihe karịrị 15 ọdịdị ihu iji hazie na karịa 10 ngwa ohere mepere, wuo uma ị chọrọ ma ose vidiyo gị!
Agwa Ihu Ihu - N'ime ihe ngosi ihu 20, Animaker na-enyere aka mee ka ihe odide gị na vidiyo gị dị ndụ.
Nchekwa onwe egbugbere ọnụ - Tinye voiceovers gị odide na-ele ha na-ekwu ya na akpaaka egbugbere ọnụ-mmekọrịta. Youkwesighi iwepụta oge iji megharịa egbugbere ọnụ agwa.
Smart Paghaa - Animators na-etinye ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ 80% nke oge ha na-emegharị ihe iji si n'otu ebe gaa ebe ọzọ. Anyị ekpebiela ịchekwa oge na mbọ gị. Animate mgbagwoju animations iji Smart Move with just the click of a button.
Mepụta ihe nkiri izizi gị ugbu a!
Bugote ajụjụ ọnụ gị, akaebe, ma ọ bụ vidiyo ndị ọzọ edere na Onye na -eme ihe nkiri -enye tọn atụmatụ dị ka igwefoto mmetụta, ihuenyo mmetụta, ọdịyo egwu, ikwu n'ụzọ, na ndị ọzọ na tinye a pro-larịị obi na-adị gị video.
Na-edezi vidiyo na vidiyo vidiyo 4K - Họrọ, bulite, ma dezie vidiyo niile n'otu ebe. Animaker na-ahapụ gị ka ị pụọ iche na vidiyo vidiyo mara mma 4K.
Ndepụta Okwu gị Videos - Na Animaker, ị nwere ike mfe denye aha vidiyo gị iji kwadebe ha maka ikpo okwu ọ bụla.
Machie vidiyo na pịa - Machie vidiyo na ederede, onyonyo, akwụkwọ mmado, na ndị ọzọ.
Mee Ka Ọdịnaya Gị Ka Ọ Dị Mma - Mfe stampụ gị logo jidesie gị vidiyo na gifs na gị onwe gị watermark.
Akụ Ahịa - N'ime 100 nde akụ maka ojiji gị. Ejikọtakwara ọba akwụkwọ Animaker na nke Getty maka ịdị mfe nke ịchọta ezigbo onyonyo ma ọ bụ vidiyo maka ọrụ gị!
Egwu na-enweghị Royalty na Mmetụta ụda - Animaker ejirila ihe karịrị egwu egwu 100 kpuchie ya na ụda ụda yana ọtụtụ puku nsonaazụ ụda na ọba akwụkwọ ọdịyo anyị.
Mepụta vidiyo mbu gi ugbu a!
Animation GIF na Short Video Onye Okike
Animated gifs bụ kediegwu maka mmadụ mgbasa ozi na email ahịa… Animaker si n'ọbá akwụkwọ na-ike na Giphy maka ala nke na-achọta ndị zuru okè GIF gị oru ngo!
Mepụta GIF gị Animated ugbu a!
Mmekọrịta na Nhazi Njikwa
Kpọọ ndị otu egwuregwu gị ka ha rụọ ọrụ iji mezuo vidiyo gị. Animaker na-enyekwa akara ngwa iji hụ na iguzosi ike n'ezi ihe nke ika gị ga-adịgide na vidiyo niile ị na-ebipụta.
Kalinda Azụmaahịa vidiyo
Ndị ọrụ ugbu a nweta kalenda ahia vidiyo na-etinye na echiche vidiyo iji nyere gị aka ịhazi na mepụta vidiyo maka ụbọchị niile pụrụ iche n'afọ. Naanị ịgagharị na ngalaba nwere ọnwa dị ugbu a dị ka isi ya na ị ga-enwe ọtụtụ echiche ọdịnaya vidiyo iji gosipụta ọnụnọ mgbasa ozi gị.
AI-Na-akwagharị Olu Overs
Ihe ikpo okwu a na - etinye onu ogugu onu ogugu iji hazie ma meputa edemede gi n'ebughi ichota talent. Uche Animaker na-enyere gị aka:
Mmadu dika Voice over - Mfe gbanwee ederede ma ọ bụ edemede gị ka ọ bụrụ nke kachasi elu nke mmadụ.
Njikwa olu dị elu - Tinye ụda, kwusi, ma ọ bụ mesie okwu ọ bụla ahọpụtara. I nwedịrị ike ime ka ụda olu ma ọ bụ iku ume.
Nhọrọ olu ọtụtụ asụsụ - Mepụta olu-okwu maka vidiyo gị na olu 50 + na asụsụ 25 dị iche iche.
Mepụta Voiceover Ugbu a
Ngosi: Abụ m mmekọ Onye na -eme ihe nkiri ma nwee njikọ ha n’isiokwu a.
Tags: aiai olu-gafereai oluihe nkirianimation gifAnimationna-aga aga studiodọrọ na dobeọzọgbanwee videona-aga aga agavidiyo vidiyovideo mmekotantinye vidiyovidiyo kalenda ahịavideo n'akwụkwọvidiyo vidiyovideo ndebiriolukwuo okwu